Ihe 35 + kacha mma Tonikaku Kawaii Quotes About Life & Romance - Ndị Ọzọ
Ihe 35 + Kachasị Tonikaku Kawaii kwuru banyere ndụ na Romance!
Tonikaku Kawaii kwuru (TONIKAWA) e si:
Tonikaku Kawaii (TONIKAWA) bụ ihe ụtọ na-ewulite mkpakọrịta nwoke na nwaanyị anime banyere di na nwunye lụrụ “na mbụ anya”. Iso ihe ọghọm fọrọ nke nta ka ọ gbuo.
Okwu a na etiti anime banyere ịhụnanya, mmekọrịta ịhụnanya, ndụ, ihe isi ike, na ihe naanị usoro ndị ahụ. Mfe ikwu na.
Lee ihe kacha mma anime nwere inye.
Tonikaku Kawaii kwuru:
1. Nasa Yuzaki kwuru
“N'ụwa a, ọbụlagodi ihe sayensị kachasị nke ihe a malitere site n'aka onye nwere afọ a na ọ dị adị. Mgbe ahụ onye gosipụtara ya mgbe eziokwu ahụ gasịrị. Ya mere e jiri gị tụnyere gị, amaghị m ihe ọ bụla gbasara ya… Mana m bu n'obi iji ndụ m niile gosipụta ịhụnanya m. Alụghị m ya n'ihi na m gosipụtara ịhụnanya m. Alụrụ m ya iji gosipụta ịhụnanya m. ” - Nasa Yuzaki
'Ebe ọ bụ na ị na-apụ… should ga-aga otogi park, ọ bụghị ọtụtụ mmadụ n'oge elekere a… Ọ bụkwa nnukwu ohere ịme ọtụtụ ihe!' - Nasa Yuzaki
“N'agbanyeghị ihe ọdịnihu na-echere m. Amaara m na m ga-enwe ike ijikwa ya! - Nasa Yuzaki
“Mgbe mbụ anyị zutere, ị dị ka ị dị nwayọ ma dịkwa jụụ isi… mana ịhụ ka okwu gị gbanwere gaa nwee ihe ọ liveụ ga - eme ka ị daa. - Nasa Yuzaki
“Ohh uhhh err… Yuzaki Nasa ebe a… lụrụ m ụbọchị ọzọ. Ma uh ... nwunye m na-ewere vidio a… Ọ mara ezigbo mma. ” - Nasa Yuzaki
“Ọ bụrụgodị na ọ ga-anwụ! Ọ bụrụ n'ezie na ị hụrụ n'anya… Ahụrụ m gị n'anya. ” - Nasa Yuzaki
“Hmm. Nke a na-emenye ụjọ. Nwunye m ga na-ama mma mgbe niile, n'agbanyeghị foto m na-ese… 64GB SD nwere ike ọgaghị ezu. ” - Nasa Yuzaki
“Achọghị m ịnwụ! Achọghị m ịnwụ! Achọghị m ịnwụ! - Nasa Yuzaki
“Ọ bụrụ na nsogbu dị, m ga-emeso ya mgbe ọ mere! N'ihi na m bụ Yuzaki Nasa! Nwoke nke ga - ebu ọsọ ọsọ ọsọ karịa NASA! ' - Nasa Yuzaki
'Enweghị mgbagha na ya. Ọ dị nnọọ mma! ' - Nasa Yuzaki
ndepụta nke usoro anime kacha mma ile anya
Ekwuru m na ọ bụ nwa agbọghọ kasị maa mma n'ụwa nile zọpụtara m. ” - Nasa Yuzaki
“Ndị mụrụ m bụ ndị gbapụrụ iche.” - Nasa Yuzaki
“Ọ bụ ezigbo nwa agbọghọ. Ọ nọ kemgbe na-enyere aka ịhazi ụlọ ịsa ahụ. ' - Nasa Yuzaki
'Ọ bụrụgodi na anyị anọghị ma ọ bụrụhaala na anyị nwere mgbanaka nke na-egosi ịhụnanya anyị ebighi ebi… Anyị nwere ike ịnwe obi anyị nso.' - Nasa Yuzaki
Ọ bụrụ na ị kpachapụ anya, ọ ga-efu gị ihe niile. ” - Naoko Yanagi
“Ọ bụrụ na anyị bi nnukwu ebe, obi ga-adị m ezigbo ụtọ. Ọ bụrụ na anyị bi na obere ebe, enwere m ike ịnwe okpomọkụ gị. Ọ bụrụ na ọ meela agadi, anyị nwere ike ibi na nsogbu ndị ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị ọhụụ, ọ ga-eji nwayọ jiri ihe ncheta ọhụụ gbapụ. Ekwenyesiri m ike na ebe ọ bụla ị nọ ga-abụ ebe m ga-abịa. ” - Tsukasa Tsukuyomi
“Di m bụ ezigbo mmadụ. Ọ na-eme ọtụtụ ihe naanị ya, mana ọ naghị eche maka mbọ nke aka ya… echefughikwa ekele ya na ịkwanyere ndị bu ya ụzọ. Ọ dị nnọọ jụụ. ” - Tsukasa Tsukuyomi
'Agaghị m alụ onye m na-ahụghị n'anya.' - Tsukasa Tsukuyomi
'Inwee naanị otu ndụ, yabụ lekọta ya nke ọma, ọ dị mma?' - Tsukasa Tsukuyomi
'Nke a bụ aka-ejide nkuru n'onwe.' - Tsukasa Tsukuyomi
Nwa agbọghọ a mere ka m chee echiche banyere Nasa-kun n'ihi ihe ụfọdụ. ” - Tsukasa Tsukuyomi
'Ọ bụrụ na ị lụọ m, m ga-eso gị gaa.' - Tsukasa Tsukuyomi
'Aha gị' Nasa 'edere dị ka' Hoshizora ', Bụ Aha mara mma n'ezie.” - Tsukasa Tsukuyomi
“’Ll ga-adị mma. Ọ na-ewe ihe karịrị nke a iji gbuo mmadụ. E wezụga nke ahụ, ị ​​dịbeghị njikere ịnwụ ma, nri? ' - Tsukasa Tsukuyomi
“Ọ bụ nwa agbọghọ ndị ezinụlọ m lụrụ.” - Tsukasa Tsukuyomi
'Nasa-Kun, ahụrụ m gị n'anya.' - Tsukasa Tsukuyomi
4. Okwu Arisugawa
“Mbụ ịhụnanya m gwụsịrị nanị peeji iri.” - Aya Arisugawa
'Akpụkpọ gị dị ka iPhone X.' - Aya Arisugawa
“Gini mere igwe elekere egwu na akwusi mgbe i kwusiri ha? Achọrọ m ka ha nọgide na-agbalị ruo mgbe m tetara. ” - Aya Arisugawa
5. Okwu Kaname Arisugawa
“So Tsukasan gini ka gi na ndi senpai n’abali? M na-super pumped elu evey n'abalị, ma m na-anụ ihe ọ bụla mgbe ọkụ agbanyụ… Ya mere, m nnọọ na-echegbu onwe na-echegbu onwe. ' - Kaname Arisugawa
“Ozugbo di kwụsịrị inyere nwunye ya aka ka ọ maa mma, nwa agbọghọ ahụ ga-agbanwe si ezigbo nwunye wee bụrụ onye gị na ya ga-ebi n’ ụlọ !! Ma ị chọrọ nke ahụ!? Senpai! ” - Kaname Arisugawa
'Ọ bụrụ na m lụrụ di m ma kwuo na' obere ebe dị mma ', m ga-agba ụlọ ahụ ọkụ ma mee ka ọ kwaga.' - Kaname Arisugawa
kedu ihe anime ka m kwesiri ile
“Oh chi! Senpai m na-adịwanye njọ kwa nkeji. ” - Kaname Arisugawa
6. Chitose Kaginoji kwuru
'Abụ m naanị onye nwere ike ime ka ọchịchọ nee-sama mezuo !! Ọ bụrụ na ọ lụọ di ma ọ bụ nwunye… Ọ bụ m! ” - Chitose Kaginoji
“Ọ bụ nru ububa nke Glasswing. Otu iko urukurubụba na-efegharị n'abalị ruo ọnwa. Ọ mara ezigbo mma… mana ọ siri ike ma na-emerụ ahụ nfe. N'elu nke ahụ, ọ na-apụ n'anya ozugbo ị na-ewepụ anya gị her Mana nke ahụ anaghị agbanwe eziokwu na ọ dị m oke ọnụ ahịa. ' - Chitose Kaginoji
Ihe onyonyo egosipụtara: isi mmalite
17 + Manga nyere ikikere Romance Manga Iji Tinye na Nchịkọta Gị
The 17+ Best Ookami Shoujo ka Kuro Ouji Quotes For Romance Fans
nọmba otu anime niile oge
gịnị ka iberi nke ndụ pụtara na anime
Anime yiri nwa na franxx